Ukuba uvavanye i-APFS kwi-beta kawonkewonke ngeFusion Drive, kuyakufuneka ubuyele kwi-HFS + | Ndisuka mac
Kwiintsuku ezimbalwa siza kuba nohlobo lokugqibela lweMacOS ePhakamileyo yeSierra. Njengoko besiphawulile amatyeli aliqela, oku kuyakwenzeka ngomhla wama-25.Kodwa ngenguqulelo yeGolden Master, oko kukuthi, inguqulelo yokugqibela ngaphandle kokuba iApple itshintshe into ngomzuzu wokugqibela, kuye kwafunyanwa ukungangqinelani obekuthethwe ngako Kwiiveki ezidlulileyo. Inkqubo yeFusion Drayivu ayikuvumeli ukusebenza ngeefayile ze-APFS. Kwelinye icala, ngexesha le-betas, oku kunokwenzeka. Nangona kunjalo, iApple ngokwayo kwingxelo, ibiphethe ukuyicacisa. Kodwa akuyomfuneko ukulungisa yonke into kwaye uqale ekuqaleni. UApple ucacisa ukuba:
Iinguqulelo ze-beta ze-MacOS High Sierra ziyitshintshile ifomathi yediski yeesistim, baziguqulela ekusebenziseni inkqubo yefayile entsha ye-Apple. Ukukhutshwa kokuqala kweMacOS ePhakamileyo yeSierra kuya kuxhasa ifomathi yefayile yefayile entsha ye-Apple, eya kuthi isethwe njengenkqubo ye-boot engagungqiyo kwiinkqubo ze-Mac nge-100% yeFlash yokugcina. Ukuba ufake ingxelo ye-beta ye-MacOS High Sierra, i-Mac's Fusion drive yakho inokuguqulwa ifomathi yenkqubo ye-Apple. Kuba olu seto aluhambelani nohlobo lwangempela lweMacOS ePhakamileyo yeSierra, sicebisa ukuba ulandele amanyathelo angezantsi ukuze ubuyele kwifomathi yediski yangaphambili.
Kule khonkco ilandelayo, U-Apple uyacacisa inyathelo nenyathelo indlela yokubuyela kwinkqubo ye-HFS + ukusuka kwi-APFS. Isishwankathelo.
Yenza ifayile ye- yokugcina noMatshini weXesha.
Khuphela uguqulelo lwamva nje lweMacOS ePhakamileyo yeSierra kwiVenkile ye-Mac App.
Yenza ephunyeziweyo ngenkqubo yokusebenza kunye noncedo lwe Indawo yokukhwelela. (akunzima ukuba ulandela amanyathelo)
Nje ukuba ifake, khetha i-Disk Utility kwii-MacOS eziluncedo.
Khetha Bonisa zonke izixhobo.
Khetha idiski apho inkqubo yakho yokusebenza ifakiwe.
Cofa ucime kwaye utshintshe ifomathi I-MacOS yandiswa (yeJenali). Yinike igama elahlukileyo ukuze ungabhideki.
Phuma kwizinto zediskio.
Khetha Phinda ufake ii-macOS kwaye ukhethe umthamo owenziwe kwinqanaba 7
Okokugqibela, xa ubuzwa ukuba uyafuna na ukufudusa idatha, khetha ugcino lwenziwe kwinqanaba 1
Ngoku uya kuba ne-Fusion Drayivu, eyi-100% isebenza kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuba uvavanye i-APFS kwi-beta kawonkewonke ngeFusion Drayivu, kuyakufuneka ubuyele kwifomathi ye-HFS +
"Akuyomfuneko ukwenza yonke into kwaye uqale ekuqaleni" ... akunjalo ... kufuneka ufomathile kwaye ubuyisele indawo yogcino (ukuba unayo kwaye ungayenza ...) xD
Ngokukrakra, ngoobani la manqaku? XD
Mholo. Andazi ukuba le ndiyithethayo itshintshile kutshanje, kodwa ubuncinci ngaphambili, ifomathi ye-macOS kunye naleyo ikopi yeXesha loMatshini kufuneka ihambelane. Ke ngoko, ukuba utshintshele kwi-APFS kwaye kuya kufuneka ubuyele kwi-HFS + kunokuqondwa ukuba ikopi yokugqibela nge-APFS ayisebenzi. Ndiyathetha, siphulukene nemisebenzi yethu kuba utshintshele kwi-APFS. Ke ngoko, akuyomfuneko ukuqala ekuqaleni »oko kuthetha ukuba awulahlekelwanga ngumsebenzi ukusukela kwiintsuku zokugqibela.
URafa Ruiz sitsho
Kwaye oku kusiphembelela ntoni okanye zeziphi iingxaki esinokuthi sibe nazo apho siza kufaka i-ssd yangaphandle kwi-imac 25 5k (ngasekupheleni kuka-2015) ????
Phendula kuRafa Ruiz
UFrancis Pena sitsho
Kutheni le nto isihogo iApple ihlala ifuna ukusicinezela xa sinezixhobo zokusombulula olo hlobo lwento